Wararkii ugu dambeeyay Qarixii ka dhacay Siinka Dheer
MUQDISHO, Soomaaliya - Fahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax Is-miidaamin ah oo saacado kahor ka dhacay deegaanka Siinka Dheere, ee duleedka magaalada Muqdisho.
Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxan, oo loo adeegsaday Gaari lagu soo xiray walxaha qarxa kaasi oo ku qarxay Barta Koonatrool ee Ciidamada NISA ku leeyihiin Siinka Dheer.
War qoraal ah oo kasoo baxay Kooxdan xiriirka la leh Al Qaacida, ayaa lagu sheegay in qaraxa ay dil iyo dhaawac ugu geesteen in ka badan 20 Askari, oo NISA katirsan.
Qaraxa ayaa wararka madaxa-banaan waxay sheegayaan inuu dhacay kadib markii Ninkii waday Gaari uu ku dhacay baaritaan lagu sameynayay Gaadiidka ka yimaada dhanka gobolka Shabeellaha hoose, isagoo markii uu arkay inuusan ka gudbi karin isqarxiyay.
Illa hadda ma jirto wax war ah oo dowladda Soomaaliya kasoo saartay khasaaraha weerarka lagu qaaday Askarteeda ku sugan Siinka Dheer, kaasi oo kusoo beegmaya wax ka yar Todobaad markii weeraro qaraxyo ah ka dhaceen afaafka Villa Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa ahayn mid xasilan, oo aan ka dhicin wax qaraxyo ah kahor inta aan la magacaabin Taliye-yaasha cusub ee Nabad Sugida iyo Booliska bishii lasoo dhaafay.
Soomaliya 01.03.2018. 13:04
Qaraxan ayaa yimid xilli Muqdisho ay ka jirto cabsi ku aadan in ay ka dhacaan weeraro...
NISA oo war kasoo saarey qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
Soomaliya 22.12.2018. 15:30
Dagaal ka dhacay duleedka Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 11.06.2018. 00:34
Al-Shabaab oo war kasoo saartey weerar ka socda Xarun ay wasaarado degan yihiin
Soomaliya 23.03.2019. 12:22
Weerarkii Muqdisho iyo sida DF iyo Al-Shabaab uga hadleen [Fahfaahin Cusub]
Soomaliya 02.03.2019. 11:04